Nke a bụ ihe ngosi igwe ọhụụ ọhụụ Casio sitere na ihe agha Iron Man | Akụkọ akụrụngwa
Nke a bụ igwefoto ọhụụ Casio nke ejiri ihe agha Iron Man mee
Watchdị nche ọdịbendị Casio na-anwa ime mgbanwe maka mkpa ahịa ọhụrụ. Ruo afọ ole na ole, ụlọ ọrụ ahụ enyela ụdị smartwatches dị iche iche maka ọha na eze chọrọ ngwaọrụ ndị na-eguzogide ọgwụ na nke kachasị, ọ bụ ezie na ọrụ ha metụtara. Mana ọ bụghị naanị otu ụlọ ọrụ na mpaghara a, ebe ọ bụ na ụlọ ọrụ ndị Japan ga-eweta na October 27 igwefoto ọhụụ akpọrọ Casio GZE-1, igwefoto na-echetara anyị ọtụtụ akụkụ nke ihe agha nke Iron Man na nke emere iji nye nkwụsi ike kachasị na ọgụ na ọnọdụ ihu igwe.
Tụkwasị na nke ahụ, ndị ahịa na-eguzosi ike n'ihe nke ụlọ ọrụ ahụ ga-enwe ike ịhụ ihe yiri ezi uche dị na ya na ọtụtụ elele egwuregwu sitere na ụlọ ọrụ Japan G-SHOCK. GZE-1 ohuru na - eso usoro ngwaahịa G-SHOCK na - enye ezigbo atụmatụ na ike. Tụfuo IP6X uzuzu na nchedo mmiri IPX8, na-enye ya ohere iguzogide tụlee nke ruru 4 mita elu, omimi miri emi nke ruru mita 50, na okpomoku di ihe ruru ogo iri n’okpuru efu.
Igwefoto GZE-1 nwere ihe mmetụta 6,9 megapixel nwere oghere sara mbara nke na-enye anyị ohere Dekọọ vidiyo nke 170,4 na-elekwasị anya na Full HD. Ọ bụrụ, n'aka nke ọzọ, anyị chọrọ ịse foto, a na-agbatị nkuku nke nlele na 190,8 degrees. Ọ nwere stabilizer, anyị amabeghị ma ọ ga-abụ ngwa anya ma ọ bụ dijitalụ, yana nhọrọ nke na-enye anyị ohere ịdekọ na nwayọ nwayọ iji nwee ọ enjoyụ ihe ahụ na oke nkọwa.
Dị ka onye bu ya ụzọ, GZE-1 nwere njikọ Wi-Fi iji kpọtụrụ ngwaọrụ ejiri gam akporo ma ọ bụ iOS lelee foto na vidiyo ndị anyị jidere. Ọ bụrụ na anyị nwekwara otu ụdị WSD F20 ma ọ bụ WSD F10 smartwatches, anyị ga-enwe ike nweta ihe edere ederede na-enweghị iji ekwentị anyị. N'October 27, Casio ga-eweta igwefoto ọhụrụ a na eze ma nye ya nkọwa niile nke ụdị igwefoto egwuregwu ọhụrụ a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Nke a bụ igwefoto ọhụụ Casio nke ejiri ihe agha Iron Man mee
Otu ihe a na-echetakwu nke Casio g-shocks nke dị elu karịa ndụ ọ bụla karịa agwa ọ bụla na-atọ ọchị, ma ọ bụ na ọ dịkarịa ala, ọ nwere ihe jikọrọ ya na ụdị elekere ahụ, bịa m sị ...
Microsoft Edge na-eme ka ụlọ ọrụ gọọmentị ya na Google Play
Ihe mgbapụta ọhụrụ na - eweghara Andrioids wee gbochie ha ruo mgbe anyị ga - akwụ ihe mgbapụta